Si toos ah ula soco weerarka Jaamacadda Garissa: 147 ayaa dhimatay | Saxil News Network
Si toos ah ula soco weerarka Jaamacadda Garissa: 147 ayaa dhimatay
abley hubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weli ku jira gudaha Jaamacadda Garissa ee ay weerarka ku qaadeen arrornimadii saakay. Halkan si toos ah ugala soco.
Dowladda ayaa sheegtay in ugu yaraan 147 ruux la dilay
Dadka dhaawaca halista ah ayaa Nairobi loo soo duuliyay
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ciidan xoog leh ay geysay goobta weerarka uu ka dhacay
17:30 (SAB): Ardey ka soo baxsaday Jaamacadda weerarka uu ka dhacay ayaa sheegay in dableyda ay dadka weydiinayeen diintooda, “kaddibna waxay tooganayeen dadka Masiixiyiinta ah”.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in baabuurta gurmadka deg dega ay ka soo baxayaan goobta weerarka
Halkan ka daawo khariiddada Jaamacadda uu weerarka ka socda ee Garissa
Ururka Al-Shabaab ayaa horey weerarro uga gaystay gobolka woqooyi-bari Kenya
Ardeyda qaar ayaa goobta weerarka Jaamacadda Garissa ka soo baxsaday iyagoo qaarka hore qaawan.
12:49 (SAB): Wasiirka amniga gudaha Kenya, taliyaha boliiska iyo dhamaan mas’uuliyiinta amniga ayaa haatan ku sugan Garissa, si ay u kormeeraan howlgalka ay ciidammada Kenya ka wadaan goobta weerarka Jaamacadda.
12:37 (SAB): Hay’adda Laanqeyrta Cas ee Kenya ayaa ku baaqdey in dadku dhiig ku deeqaan, waxay sheegeen in dhaawacyada qaarkood ay halis yihiin.
Iskuullada Garissa ayaan weli furmin maanta, iyadoo ardeydan ay u daawasho tageen goobta weerarka.
12:21 (SBA): Afhayeen u hadlay Al-Shabaab ayaa sheegay in dableydii weerarka qaadday ay “nabad qabaan” oo ay ku sugan yihiin gudaha Jaamacadda
12:16 (SBA): Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyadda weerarka ka socda Jaamacadda Garissa
Ardeyda qaar ayaa ka soo baxsaday gudaha jaamacadda uu weerarka ka socda.
Boliiska Kenya ayaa hareereeray goobta weerarka ka dhacay